२७ हजार पैसा पठाउँदा १० लाख नगद उपहार ! Bizshala -
२७ हजार पैसा पठाउँदा १० लाख नगद उपहार !
काठमाण्डौ । यसपटकको दशैं, तिहार र छठपर्वलाई लक्षित गरी आईएमईले ल्याएको ‘आईएमई छक्का–पञ्जा’ अफर अन्तर्गत नगद रु. १० लाख राशिको पहिलो बम्पर उपहार आइएमई सेवाग्राही थानेश्वर न्यौपानेले प्राप्त गरेका छन् ।
कतारबाट नेपालमा रहेका आफन्तलाई २७ हजार ५ सय पठाएका न्यौपाने सफ्टवेयर पद्वतिमा आधारित छनोट कार्यक्रममा भाग्यशाली विजेता घोषित भएका हुन् ।
काठमाण्डौ पानीपोखरीस्थित आइएमई केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित घोषणा कार्यक्रममा आइएमईका ब्राण्ड एमबास्डर दीपकराज गिरी लगायत आइएमईका उच्च पदस्थ कर्मचारीको सहभागिता थियो ।
त्यस्तै तेस्रो १५ दिनको जीवनबीमा आईएमई सेवाग्राही बिमल गौतमले प्राप्त गरेका छन् । सफ्टवेयर पद्वतिमा आधारित छनौट कार्यक्रममा युएईस्थित अल–अहलियाबाट नेपालमा पैसा पठाउनु हुने गौतम भाग्यशाली विजेता छनोट भएका हुन् । भाग्यशाली विजेता गौतम वा निजले सिफारिस गरेको व्यक्तिले आईएमई लाइफ इन्स्युरेन्सको छ लाख बराबरको जीवनबीमा प्राप्त गर्नेछन् ।
यही भाद्र १२ गतेदेखि संचालनमा ल्याईएको सेवाग्राहीमूखी प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रममा देश विदेशका लाखौं सेवाग्राही सहभागी भई दैनिक ‘लक्कीड्र’बाट करिब २ हजार ७ सय जना आईएमई पे क्यासमार्फत् पुरस्कृत भइसकेका कम्पनीले जनाएका छन् ।
मङ्सिर ३ गतेसम्म १२ हप्ता संचालन हुने यस सेवाग्राहीमूखी कार्यकममा पैसा पठाउनुहुने सेवाग्राहीमध्येबाट ट्रान्जेक्शन नम्बर र नामका आधारमा सफ्टवेयर पद्वतिमा आधारित रही विजेता छानिन्छन्।
सिटिजन्स बैंकको दोश्रो बजार मूल्य एफपीओ नजिक, नेपाल बैंकको
काठमाण्डौ । एफपीओ निश्कासन भए पनि नबिकेर सकस भोगिरहेको नेपाल...
काठमाण्डौ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य...
बैंकका कर्मचारीलाई तालिम अनिवार्य, काम थालेको २ वर्षभित्र
काठमाण्डौ । बैंक तथा बित्तीय संस्थामा कार्यरत सहायकदेखि अधिकृत...
काठमाण्डौ । कुनै पनि फर्म तथा कम्पनीहरुले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र...
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले संस्थागत निक्षेपमा हुने...
सेयरको मूल्य २० % सम्म घटे पनि मार्जिन कल गर्न नपाइने व्यवस्था
काठमाण्डौ । धितोमा राखिएको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्म घटे पनि...
इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको युरोमनि
काठमाण्डौ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमीटेडले युरोमनी...
सेञ्चुरी बैंकका ब्राण्ड एम्बासडरमा पारस खड्का र प्रतिभा माली
काठमाण्डौ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले नेपाली क्रिकेटका कप्तान पारस...